Posted: Sadaasa/November 3, 2010 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (9)
Fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo bara 2005 taasisan kan adda isa taasisu, barattooni Oromoo diina meeshaa hidhatee jiru waliin harka qullaa soda tokko malee hudhanii wal qabuu isaaniiti. Fincilli kun Oromiyaa mara kan hammate yoo tahu, wal quunnamtiifi tokkommaa barataan Oromoo bakka cufatti qabu kan diina rifachiise ture. Diinnis akka malee rifachuun Waraana harkaa qabu, Oromiyaa keessatti facaasuun gootota barattoota Oromoo sodaachisuuf yaale. Dargaggoon Oromoo kaabaaf kibbaa, bahaaf dhihaa waliif dirmachuun fincila finiinse. Gaaffiilee barattooni Oromoo dheeheessa turan keessaa inni gurguddaan, Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu, Mirgi Hiree ofii Ofiin murteeffachuu Uummata Oromoo haa mirkanaahu, Hidhamtoonni siyaasaa Oromummaan yakkaman gad haa lakkifaman, ABOn nu haa bulchu, fi kan biro ture. Gaaffii barattootaa kanaaf deebii diinni qopheesse, gara laafina tokko malee baratoota harkaa qullaa jiran irratti Rasaasa gad roobsuu ture. Kanaafis Ragaa kan tahu, wareegamuu baratoota Oromoo sadarkaa 2ffaa Amboo, barataa Jagamaa Badhaaneefi Kabbadaa Badhaasaa ti. Barattooni kun lameen hiriira nagayaa guyyaa san gudhamaa jiru irraa qooda fudhachaa odoo jiranii tarkaanfiin gara jabinaa battalumatti irratti fudhatame. Tarkaanfiin diinni guyyaa san fudhate sochii Oromiyaa fincilaa keessatti eegale sodaachisuuf haata’u iyyuu malee, gootonni barattoota Oromoo caalatti bakka maraa fincila finiinsuun Mootummaa biyyatti rifaasisuun Magaalaafi baadiyyaa Oromiyaa gara dirree lolaatti jijjiire.
Fincili diddaa gabrummaa kun babal’achuun, wareegamuun barattoota Oromoo bakka adda addaatti daddabalaa deeme. Kaan mana hidhaatti dabree reebicha gara jabinaa irratti gaggeessuun, barataa waggaa 4ffaa Yuuniversitii Finfinnee kan tahe barataa Gaaddisaa Hirphasaa du’aaf akka inni saaxilamu godhan. Achuma barataa moraa Yuuniversitii Finfinnee bartataa Alamaayyo Garbaa uumamaan qaama hir’uu ta’e mana hidhaa keessa baduuf jedhe jechuun rasaasan tumanii ajjeessan. Diddaa barattooni eegalan kun Oromiyaan ala baratoota barnoota Olaanaa baarachaa jiran birattis deggersa guddaan itti fufe. Baarataan Oromoo Impaayera biyyatti keessatti tarkaanfiin adda addaa akka fudhatamuuf wal quunnamtiin baratoota Oromoo caalaatti akka jabaatu taasise. Addunyaa birattis dhageettii guddaa argate.Bakkootii adda addaattis Alabaan ABO guyyaa murtaahef gad dhaabbuun akka balali’u gochuu irra dabree Qabsoo bilisummaaf godhamu dhugaa ta’uu isaa mul’ise. Ilmi Oromoo barnootaaf manaa bahe reeffi isaa yeroo maatii issaf deebi’u, eenyutu rafee haa buluree? Kanatu baratoota baratoota Oromoo bakka jiran maraa wal faana hiriisuun tokkummaan gaaffii mirgaa akka kaasan taasise.
Wareegamuu, qaamaa hir’achuu, barnoota irraa adabamuu fi mana hidhaatti dabramuun barataa Oromoo yeroo sanii, meeqan keenyatu yaadata? Meeqan keenyatu immoo kaayyoo isaan irratti wareegaman san galmaan gahuuf bakka jirru maraa waan dandeenyuun dirqama lammummaa bahaa jirra? Moo gaaffii barattonni Oromoo gaafataa turan sun deebii argattee jirti? Dhugaa dha, bara 2008 irraa eegalee haalli mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalate sochii siyaasaa haa laaffisu malee waan har’aa taa’aa jiru san duubatti dhiifannee , meeqan keenyatu daandii gootonni Oromoo bilisummaa saba isaaniif eegalan san galmaan gahuuf dalaguutti jira.? Gaaffiin kun kan dargaggoo Oromoo ilaallattu taati. Yaa ilmaan biyyaa, nuti dhallotni har’a waan warri nu afoo turan tolchan ykn balleessan komachuun yeroo keenya gubaa jiraanna yoo tahe, dhalootni nutti aanee jiru immoo waahee keenya maal dubbata laata? Of gaafadhaa. Waa maraafuu Torbeen fuuldura keenya jirtu kun waqtii/ waktii baratoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman itti yaadannu waan taheef waliin haa yaadannun jedha.
Nov 4, 10 at 9:40 am
Ilmaan Oromoo kanneen Mirga saba isaanii kabachiisuuf waan jijjiirraa hin qabne lubbuu takkittii qaban wareegan Hundaafuu kabajaa ( Ulfina ) hammana hin jadhamneen qabaaf. Waan jaallan Irratti wareegamanis bakkaan ga’uufis waaniin dandayou mara wareeguufiis qophiidha. Time to move forword. Action Action Action now !!!! No more siting there doing nothing.
Nov 4, 10 at 12:08 pm
Barattoonni Oromoo seenaa QBO keessatti akka urjii ifanii keessaa mul’atu.Galmee jaallan QBOf kufaniittii dabalamanii jiru.Akka kaayyoo isaan kufaniif galma ga’u hojjachuun qooda barattoota lubbuun jiranii fi lammii Oromoo hundaa ti.
Nov 4, 10 at 6:51 pm
Duran dureesse baruu yadanoo baratoota oromoo dhaloota fincilee jedhe nama bareese galatomin jedha,!!!!!!
Seena qabsoo bilisummaa keenyaa of duba deebinee yeeroo xixaluun waan heduu nu yaadachissa, karaa dheeraa fi jeeqama kuns ajjechaa,hidhaa,saammamu fi biyyaa baqchuu tumaamamuu (torture) Ajjeefamu maqa Oromootin himamee hin dhumuu.Lubbu jagnoota Oromiyaa heduutuu galaafame, ajjeefame,miseensoota fi deegartootaa ABO jedhaman. Seena garboonfataa keesatti, Uummatni gabroonfatame tokko akka hin bilisoomne kaara danda hundanu irratti hojjachu dha. Haa ta’uu maal dhaloota fincillee ka’ee dura dhabchoon innuumaa hin jire,gumaa jaginootaa keena basuu fi halkan guyyaa irratii haa daalgiinuu. Oromiyaa bilisoomite(FREE) arguu fi amaallee dachaan haa qabisoofinuu keesatuu dargaggoota (barattootaa) illiman keena garbuumaa dhalchissu hin qabinu nu irrati haa dhabatuu nu dhabaminee bilisuumman haa maargiituu yeeroon ama haa jabanuu.
Nov 4, 10 at 7:41 pm
Hanga gabrumaa jalaa hin baanetii akaa barota/motumota darban motumaan hardha angoo irra jirus ta’e borisii impayerra sana keesati mo’uufi carraqu, wanaa waya’aa fidee hin dhufu. Kanaafu, nuti Oromooni biyaa ambaa kesaa jiru hangaa dandeetii keenya ABO bira dhabachudhan isaa dargagoni, shamraani fi mangudoni Oromoo dabraan lubu isaanitini kafalan, nuti wana lubu namaa hin baasifinee, baasii keenya garmalee baasnu iraa kunee dhabaa keenya ABO hagargaaru.
Nov 4, 10 at 8:01 pm
Yaa ijjollee Abbaa gadaa,
Harkaa fuunee hundaan.
Jagnootiif gootin Oromoo waan isaan saba saanii Oromoof ta’anii dubbatamee hin dhumu. Lubbuu saanii dabarsanii kennanii seenaa bareedaa ka’aniiru. Garuu amma yeroo kenyaa kana, unniimoo maal hojjeechaa jiraa? Itti yaadamee. Ilmaan Oromoo bor maaliin nu yaadatuu? Gantuu wollanssoo Oromoo mo, gaachaana qabsoo Oromoott nun jeedhuu?
Nov 4, 10 at 10:26 pm
Barattoottnii fi dargaggoon Oromoo Qabsoo saba kamuu keessatti (warraaqsa) bakka tokko irraa bakka tokkotti gara barbaachisutti geessuuf tarree hangafaa irratti argamu. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ammoo wareegamni isaan baasan bakka guddaa qaba. Biyya lafaa kana irratti kabajjaan bilisummaa sabaaf jecha wareega lubbuu baasuu kan caalu tookko illeen hin jiru. Barattoonni Oromoo fi dargaggoon akkasumas kannee fincila diddaa gabrummaa yeroodhaa gara yerootti iddoo adda addaatti haala adda addaatiin lubbuu dhaban seenaa isaanii bara baraan yaadatama. Hin duune , ni jiraatu.
Inni yaaddoo nutti ta’uu qabu nuti hoo kanneen lubbuun jirru seenaa akkamii qabaachuuf jiraanna isa jedhuu dha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo , bakkuma jirtan hundatti saba keenna gabrummaa akka malee bira kutee lafaa fi lafee nu seena kana gamtaan akka uf irraa hiddaan buqqifnee darbinu bakka jirtan hundatti jajjabaadha. Youth..you know that we are the future . Booreen akka nutti hin hafne. Gumaa lammii keennaa bifuma ta’u hundaan baasuuf haa wal qabannuu!!! Oromia shall be free!!
Nov 5, 10 at 4:31 am
Jallaan gammeeyyi kalessa qabsoo irraatti kufaan yeroo yaadannu gaddaaf miraa haloo bahuu of kessaatti biqilchaa, kan nu kessaatti biqilee ammo dagagsaa torbaan kana dabaarsina. kessaatuu ijoolee(baratoota) dandii baruumsa irratti gaara jabbina dinaan waregaaman yaadachun qofti gaha hin ta`uu, kayyo isaan kaleessaa itti midhaamanif, gaffi isaan kaleessa gafaatnif deebi barbaadutu nuti egama!! Jallaan dandii barumsaa irraatti kaleessaa kuftaan guyyaan yaadanno kessaani seenaa ilmaan oroomo waalin jirata!!
GUUMA KESSANIF SAABA DHABAATUU RABBI NU HA TAASISU!!
Nov 10, 10 at 4:29 am
Ilmaan Oromoo kan taatan hundinu gaaffii armaan gadii kana ifgaafachu qabna??
1.Namootni diddaa gabrummaaf jecha diina dura dhaabbatani wareegaman kun akka kiyyaafi keeysanitti jireenya bareedaa jiraachu ni jibbani?
2.Wanni isaan irratti wareegaman san eenyyuf jecha?
3.Erga nuuf jecha wareegaman,lubbuu isaani nuuf kannan nuti hoo waan isaan irratti wareegaman san bakkaan gayuuf maal godhaa jirra?
3.Yoo humaa godhaa hin jiraatin,amma irraa eegale maalin godhuu qaba???
4.Qoodni narraa eegamu maali???
kanneen kana if gaafanne ammuma kana irraa kaane qabsoo bilisummaaf godhamu cinaa dhaabbachu qabna.Qabsaawaan ni kufa Qabsoon itti fufa!!!!!!!!!!!
Nov 10, 10 at 5:39 am
Yaa ilmmaan Oromoo Dirqama dachaa baatan jirataan, kesaahuu dhaloota haaraa (Qubee Generation) obboolaan keesan qalammaa fi Dabtaraa baattan Qawee diina duraa dhabatani waregama lubuu itti kafalan Walabummaa Oromiyyaa fi Bilisummaa sabaa Oromoottif. kaayyoo isaan waregammanif kan fixaan basuu isinii. kanaaf Qooqqodamsaa fi fara tokkummaa sabaa oromoo kan ta’ee gandummaa AWAALA ITTI TOOLCHITANI tokummaa sabin keesan umamaan qabuu tikisaa, kaayoo Obbolaan kessan itti darban(waregaman) fixaan akka basataan seenaan isiin gafatti
Kan sabaaf waregaamee Goota!!
kan gummaa baasuu dhalootaa!!